သွေးတိုးကျစေနိုင်သော လက်တွေ့အစွမ်းထက် မြန်မာတိုင်းရင်းဆေးမြီးတို ၉မျိုး – Askstyle
သွေးတိုးကျစေနိုင်သော လက်တွေ့အစွမ်းထက် မြန်မာတိုင်းရင်းဆေးမြီးတို ၉မျိုး
သွေးတိုးကျစေနိုင်သော လက်တွေ့အစွမ်းထက် မြန်မာတိုင်းရင်းဆေးမြီးတို ၉မျိုး.
သွေးတိုးရောဂါအတွက် မြန်မာဆေးမြီးတို (ဆေးနည်းတို) များစွာရှိသည်။ လူတစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး ပျောက်ကင်းစေနိုင်သော နည်းလမ်းများ မတူညီသော်လည်း တိုက်ဆိုင်၍ ပျောက်ကင်းသွားလျှင် ငွေကုန်ကြေးကျမများဘဲ အလွယ်တကူ မိမိပတ်ဝန်းကျင်တွင် ရရှိနိုင်သော အပင်၊ အမြစ်၊ အရွက်၊ အသီး၊ အပွင့်တို့ မှ ရရှိခြင်းဖြစ်သဖြင့် အားကိုးထိုက်သော ဆေးမြီးတိုများဖြစ်သည်။
အချို့ခေတ်ပညာတတ် တိုင်းရင်းဆေးကို အထင်မကြီးသူများပင် သွေးတိုး၊ ဆီးချိုကဲ့သို့ ရောဂါကြီးများ ရုတ်တရက် အသက်ဆုံးနိုင်သည့် နှလုံးသွေးကြောပိတ်၊ ရင်ဘတ်အောင့်ရောဂါကြီးများ ဆေးမြီးတိုနှင့် ပျောက်သွားသည်ကို တွေ့ရသောအခါ အံ့သြနေကြသည်။ ဆေးမြီးတိုများသည် လူထုအတွက် အသုံးဝင်သော တိုင်းရင်းဆေးပညာဖြစ်သည်။
၁။ ရှောက်သီးအခွံပါ ၄ စိတ် စိတ်ပြီး မတ်ခွက်တွင်ထည့် ရေနွေးစိမ်ထားပြီး အအေးခံ၍ တစ်နေကုန် သောက်ပါ။
၂။ ရှောက်သီးအရည်ညှစ် ၃ ဇွန်း+ပျားရည်စစ်စစ် ၁ဇွန်း ထမင်းစားပြီးသောက်ပါ။
၃။ ရှောက်ရွက်အနု၊ အရင့် တစ်နေ့လျှင် ၇ ရွက်မှ ၁၀ ရွက်ခန့် နေ့စဉ်အတို့အမြှုပ် ပြုလုပ်၍စားပါ။
၄။ ငါးပိရည်၊ ငံပြာရည်၊ ငါးခြောက်စသည်တို့သည် မြန်မာလူမျိုးတို့နှင့် မကင်းနိုင်သော အစာများ ဖြစ်သည်။ ထိုအစာများ စားသည့်နေ့တွင် ဒန့်သလွန်ရွက် ဟင်းချိုကို ကြက်သွန်ဖြူနိုင်နိုင်ဖြင့် ချက်ပြီး တွဲဖက်သောက်ပေးပါ။ ကြက်သွန်ဖြူသည် သွေးတိုးကို ကျစေနိုင်သည်။ (သွေးတိုးရောဂါ ဖြစ်ပွားခဲ့ရာ ကြက်သွန်ဖြူကို နေ့စဉ်စားသုံးခဲ့ပါသဖြင့် ပျောက်ကင်းခဲ့သည်။) (မဟတ္တမဂန္ဒီ)
၅။ ဒန့်သလွန်သီးအရင့်များကို နေဖြင့် အခြောက်လှန်းထားပြီး သွေးအလွန်တိုးလျှင် ၂ စေ့၊ ၃ စေ့ ဝါးစားပါ။
၆။ သင်္ဘောအဖိုပင်၏ အပွင့်ကို ပြုတ်၍ စားပါက သွေးတိုးရောဂါ သက်သာစေသည်။
၇။ ကြက်သွန်နီကို ထက်ခြမ်း ခြမ်း ရေတစ်ဖန်ခွက်တွင် စိမ်၍ နံနက်အိပ်ယာထစောစော သောက်ပေးလျှင် သွေးတိုးရောဂါကို ကာကွယ်သည်။ နံနက်အိပ်ယာထချိန် ခေါင်းကိုက်ခြင်းကို သက်သာစေသည်။
၈။ ပြောင်းဖူး၏ထိပ်မှ အမွှေးကိုပြုတ်၍ အရည်ကို အကြမ်းပန်းကန်တစ်လုံးစာသောက်လျှင် သွေးတိုးရောဂါ သက်သာစေသည်။
၉။ ချင်းလက်နှစ်ဆစ်ကို ထုထောင်းအရည်ကိုယူ သံပရာသီးတစ်လုံးအရည်နှင့် ပျားရည်တစ်ဇွန်းစပ် နေ့စဉ်သောက်ပါ။ သွေးတိုးရောဂါဘေး ကင်းဝေးနိုင်သည်။
Credit- ကြည်လွင်မြင့် (မုဒြာ)
.သှေးတိုးကစြနေိုငျသော လကျတှအေ့စှမျးထကျ မွနျမာတိုငျးရငျးဆေးမွီးတို ၉မြိုး.
သှေးတိုးရောဂါအတှကျ မွနျမာဆေးမွီးတို (ဆေးနညျးတို) မြားစှာရှိသညျ။ လူတဈဦးနှငျ့တဈဦး ပြောကျကငျးစနေိုငျသော နညျးလမျးမြား မတူညီသျောလညျး တိုကျဆိုငျ၍ ပြောကျကငျးသှားလြှငျ ငှကေုနျကွေးကမြမြားဘဲ အလှယျတကူ မိမိပတျဝနျးကငျြတှငျ ရရှိနိုငျသော အပငျ၊ အမွဈ၊ အရှကျ၊ အသီး၊ အပှငျ့တို့ မှ ရရှိခွငျးဖွဈသဖွငျ့ အားကိုးထိုကျသော ဆေးမွီးတိုမြားဖွဈသညျ။
အခြို့ခတျေပညာတတျ တိုငျးရငျးဆေးကို အထငျမကွီးသူမြားပငျ သှေးတိုး၊ ဆီးခြိုကဲ့သို့ ရောဂါကွီးမြား ရုတျတရကျ အသကျဆုံးနိုငျသညျ့ နှလုံးသှေးကွောပိတျ၊ ရငျဘတျအောငျ့ရောဂါကွီးမြား ဆေးမွီးတိုနှငျ့ ပြောကျသှားသညျကို တှရေ့သောအခါ အံ့သွနကွေသညျ။ ဆေးမွီးတိုမြားသညျ လူထုအတှကျ အသုံးဝငျသော တိုငျးရငျးဆေးပညာဖွဈသညျ။
၁။ ရှောကျသီးအခှံပါ ၄ စိတျ စိတျပွီး မတျခှကျတှငျထညျ့ ရနှေေးစိမျထားပွီး အအေးခံ၍ တဈနကေုနျ သောကျပါ။
၂။ ရှောကျသီးအရညျညှဈ ၃ ဇှနျး+ပြားရညျစဈစဈ ၁ဇှနျး ထမငျးစားပွီးသောကျပါ။
၃။ ရှောကျရှကျအနု၊ အရငျ့ တဈနလြေှ့ငျ ၇ ရှကျမှ ၁၀ ရှကျခနျ့ နစေ့ဉျအတို့အမွှုပျ ပွုလုပျ၍စားပါ။
၄။ ငါးပိရညျ၊ ငံပွာရညျ၊ ငါးခွောကျစသညျတို့သညျ မွနျမာလူမြိုးတို့နှငျ့ မကငျးနိုငျသော အစာမြား ဖွဈသညျ။ ထိုအစာမြား စားသညျ့နတှေ့ငျ ဒနျ့သလှနျရှကျ ဟငျးခြိုကို ကွကျသှနျဖွူနိုငျနိုငျဖွငျ့ ခကျြပွီး တှဲဖကျသောကျပေးပါ။ ကွကျသှနျဖွူသညျ သှေးတိုးကို ကစြနေိုငျသညျ။ (သှေးတိုးရောဂါ ဖွဈပှားခဲ့ရာ ကွကျသှနျဖွူကို နစေ့ဉျစားသုံးခဲ့ပါသဖွငျ့ ပြောကျကငျးခဲ့သညျ။) (မဟတ်တမဂန်ဒီ)
၅။ ဒနျ့သလှနျသီးအရငျ့မြားကို နဖွေငျ့ အခွောကျလှနျးထားပွီး သှေးအလှနျတိုးလြှငျ ၂ စေ့၊ ၃ စေ့ ဝါးစားပါ။
၆။ သငေ်ျဘာအဖိုပငျ၏ အပှငျ့ကို ပွုတျ၍ စားပါက သှေးတိုးရောဂါ သကျသာစသေညျ။
၇။ ကွကျသှနျနီကို ထကျခွမျး ခွမျး ရတေဈဖနျခှကျတှငျ စိမျ၍ နံနကျအိပျယာထစောစော သောကျပေးလြှငျ သှေးတိုးရောဂါကို ကာကှယျသညျ။ နံနကျအိပျယာထခြိနျ ခေါငျးကိုကျခွငျးကို သကျသာစသေညျ။
၈။ ပွောငျးဖူး၏ထိပျမှ အမှေးကိုပွုတျ၍ အရညျကို အကွမျးပနျးကနျတဈလုံးစာသောကျလြှငျ သှေးတိုးရောဂါ သကျသာစသေညျ။
၉။ ခငျြးလကျနှဈဆဈကို ထုထောငျးအရညျကိုယူ သံပရာသီးတဈလုံးအရညျနှငျ့ ပြားရညျတဈဇှနျးစပျ နစေ့ဉျသောကျပါ။ သှေးတိုးရောဂါဘေး ကငျးဝေးနိုငျသညျ။
Credit- ကွညျလှငျမွငျ့ (မုဒွာ)